I Textile Ceramics China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Textile Ceramics - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 13 ye-I Textile Ceramics)
Namuhla, ibhuloho ye-ceramic ibilokhu isetshenziselwa imishini ye-textile ngenxa yezimpahla zabo ezivelele zokugqoka nokulwa namakhemikhali kunezensimbi .. Kuyinto inguquko enkulu ekunkeleni kwezolimo. Inombono ongcono kakhulu wekhwalithi ye-spary kanye nokunemba kokugeleza ngebasi le-ceramic. Siyakwazi ukukhiqiza...
I-textile roller roller I-textile roller ishicilelwe ngo-95%, 99% i-alumina. It has a kangcono ukugqoka ukugqoka, izici low friction kuka plastic kanye metal. Yiqiniso, kuyindleko ephumelelayo kune-roller ye-ceramic roller. Ukuze ukwandise impilo yokusebenza yedivayisi, i-Ceramic bobbine iye yasetshenziselwa kakhulu...
I Textile Ceramics